Uqikelelo lweNdebe yeHlabathi eMzantsi Afrika -iGeofumadas
Izibikezelo zeNdebe yeHlabathi eMzantsi Afrika
Epreli, 2010 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Le ayisiyonto intsha, ibikho ukusukela kwiNdebe yeHlabathi yangaphambili, kodwa isikhumbuza ukuba amaphupha akufuneki afe. Ngaphantsi kakhulu ngoku ukuba abantwana bam bandiphambanise nge-albhamu yabo, endinoluvo lokuba iimbono azinakuphela.
Ubalo lwenzululwazi lwenziwe ukuba ngubani na oza kuphumelela indebe ye-2010:
1. Brasil Uphumelele iNdebe yeHlabathi kwi1994, ngaphambi koko, baphumelela iNdebe yeHlabathi kwi1970.
Ukuba i-1970 + 1994 yongezwa = 3964
2. Argentina Uphumelele iNdebe yeHlabathi yakhe yokugqibela kwi1986, ngaphambi kokuba baphumelele iNdebe yeHlabathi kwi1978.
Ukulingana, ukongeza i-1978 + 1986 = 3964
3. Alemania Uphumelele iNdebe yeHlabathi yakhe yokugqibela kwi-1990, ngaphambi koko, baphumelela iNdebe yeHlabathi kwi1974.
Akumangalisi, i-1974 + 1990 = 3964
4 INdebe yeHlabathi ye-2002 iBrazil iphindaphinde i-Championship, kwaye iyavakala, kuba ukuba siyongeza i-1962 (apho iBrazil ibiyintshatsheli) i-1962 + 2002 = 3964Ke ngoko, iBrazil kufuneka ibe yintshatsheli, kwaye kwaba njalo.
5 Kwaye ukuba ufuna ukuqikelela intshatsheli yoMzantsi Afrika 2010.
Uthathiwe 3964 -2010 = 1954 ... Kwakuloo nyaka intshatsheli yehlabathi yayiyiJamani, ngoko ke kuninzi okushiyekileyo esinokuphupha ngako.
6 Kodwa ukukhohlisa akupheleli apho: iiFans ze amazwe athe Ngoku kwiNdebe yeHlabathi, njengeSpain, iParaguay, iHonduras, iMexico okanye iChile sinesizathu sokuvuya, kuba ngokuqinisekileyo siyayiphumelela indebe yehlabathi kunyaka 3964. Kuba i-0 + 3964 = 3964.
Ke kufuneka silinde nje ukuba i-488 yehlabathi ibe ziintshatsheli. Oko kulingana kwi1958 iminyaka. Kwi-1958 iBrazil ibiyintshatsheli yehlabathi. Ke eyokugqibela izakuba ngokuchasene namaBrazilians ...
Oluphi uzuko olungcono esinokululindela.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ingxaki 4: I-Acer Aspire One, musa ukuthumela kuDatashow
Post Next Imizuzwana ye-37.5 yokubamba kwakho kokugqibelaOkulandelayo "
I-4 iphendula "kwingqikelelo yeNdebe yeHlabathi eMzantsi Afrika"
I -ffffffff, ngombulelo siphumelele. Andifuni ukulinda i-3964 kuba uninzi lwakho aluzukuwonwabela umcimbi onje nam
aupa Spain !!!
Hehe, olo hlalutyo lunomdla ngakumbi.
Njengoko iNdebe yeHlabathi ibanjwa rhoqo emva kweminyaka ye-4 kuyacaca ukuba ukongeza imihla emibini yeHlabathi yeNdebe yeHlabathi inokufikelela kwixabiso elifanayo (ukuba enye iyiminyaka eyi-4 ngaphambili kwaye enye iyahambelana nokuba yiminyaka ye-4 kamva, isamba senza okufanayo njengoko bekulindelekile).
Kwaye ekubeni kukho i-VERY ezimbalwa zeentshatsheli (i-38 yehlabathi Championship edlaliweyo kwaye kukho amazwe angama-7 kuphela weqela leentshatsheli), ukungathandani kwama-3964 kubetha "umdlalo".
Nangona kunjalo, isesesona sicazululo sinomdla kakhulu ^ _ ^
Ubumbano olumangalisayo! ... Ngokudibana? ... Ndiza kufunda kabala ...